Geotech + Dronetech: ịkwesighi ịhapụ ya - Geofumadas
Jenụwarị, 2019 Geospatial - GIS, GPS / Equipment, innovations
3 na 4 na-esote site n'April nke afọ a 2019, Fairoftechnology - Ụlọ ọrụ Spanish, nke dabeere na Malaga, na-ahazi ụdị ihe niile metụtara nkà na ụzụ- Ọ na - akpọ ndị ọrụ ibe geoengineering niile ka ha sonye na nnukwu ihe omume, ebe a ga - egosi ọtụtụ mmegharị nke afọ ndị na - adịbeghị anya. Fairoftechnology, nwere otutu ime ụlọ nwere isiokwu a kapịrị ọnụ dabere na mkpa nke ndị sonyere na ndị na-egosi ihe ngosi.
Akụkụ ndị bụ isi ebe ọrụ ya lekwasịrị anya gụnyere: geotechnology, drones ma ọ bụ RPA, ọrụ ugbo, iwu ụlọ, ije, injinịa na nhazi data. Ngalaba niile na teknụzụ zuru oke nke chọrọ mkpa nzute nke na-eme ka ihe ọmụma na ọnọdụ dị ugbu a na ahịa.
Ihe ọmụma nke Fairoftechnology gụnyere 6 salons, nke bụ: geotech, dronetech, Agrotech, Buildingtech, Datatech na Smarttech na-esote:
drone: otu n'ime teknụzụ ndị ọganihu n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na iwu ya maka onwe, azụmahịa ma ọ bụ nkà mmụta sayensị. Ebe nchekwa bụ ụlọ nzukọ a raara nye nanị ịkọ ihe niile metụtara ụlọ, ọganihu, mgbanwe na ngwọta dabere na ụgbọelu ndị a.
Geotechnology: kpughere ya n'ime ụlọ Geotech, a na-ebute ya na nke a, kwalite ma kwalite ozi metụtara geomatics.
Ugbo: Site na Agrotech show, ọ raara onwe ya nye igosi teknụzụ nile n'ọhịa maka nchekwa gburugburu ebe obibi na nchekwa.
Egwuregwu arụ ọrụ: ụlọ ngosi Buildingtech, raara onwe ya nye iji gosi, kwalite ma kwalite ngwọta ụlọ. Na-echeba na teknụzụ niile mikpuru n'ime AEC na SmartCities, dị ka (BIM, R + D + M)
Software na nhazi data: na Datatech, a na-akwalite ngwọta nhazi ihe ọmụma
Obodo mara mma: Smartech, bụ ebe kacha mma ị ga-esi nye ndị mmepe na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na teknụzụ ndị dị na Smart Cities. N'ụlọ a, a na-akwalite ụdị ọrụ dị iche iche iji mepụta teknụzụ ọhụrụ, ma ọ bụ iji kwado ya ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'oge gara aga na-arụ ọrụ.
Ma, nke a bụ April 3 na 4, naanị ụlọ abụọ ga-emeghe, Geotech na Dronetech. Na Geotech, a ga-egosipụta ihe ọhụụ niile metụtara ohere niile, ikuku na nyiwe ala nke na-ejide ozi site na ntanetị. N'otu aka ahụ, ọganihu niile kwekọrọ na ngwanrọ na ngwaike maka nhazi data nke ụdị a ga-ahụ. Ihe ndi a dabere na Fairoftechnology- spring 2019 cross-sector framework.
Gịnị ka ọ na-achọ? Iji kpọkọta ndị niile nwere mmasị na ubi nke geomatics n'otu ebe, bụrụ ha nnukwu ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ mba-mba, ọbụna ndị na-akwalite uto nke teknụzụ ndị a n'otu n'otu. N'otu aka ahụ, kwalite ọrụ ahụ, si otú ahụ nwee ike ịmekọrịta njikọ aka, nke na-enye ohere nzaghachi nke usoro na usoro metụtara 4ta. Ọ dijitalụ.
Nkọwa Geotech nke onye nlekọta ọkachamara bụ:
Ndị na-ekesa akwụkwọ ngwa ngwa,
ụlọ ọrụ ntanetị maka nhazi, nhazi na ọgbọ nke ngwaahịa ngwaahịa,
R + D + m aka: nyocha, nkà na ụzụ nyiwe,
Ndị ọkachamara n'ihe banyere Geomatics,
Ndị ọkachamara nke nhazi na injinia (Civil, Industrial, Agricultural),
Ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a raara nye ọzụzụ,
na onye ọ bụla nwere mmasị na mmepe, iwu na ọganihu nke teknụzụ ndị a.
Nke a bụ mbipụta izizi nke ihe omume n'ime ụlọ Geotech, ugboro ole ọ ga - adị kwa afọ ga - enwe ụbọchị abụọ, ọ ga - abụ ọkachamara ọ ga - eme na Costa del Sol Conference and Exhibition Center. ha bụ akụrụngwa na ihe mmetụta, nyocha mpaghara, cadastre-onwunwe na n'ikpeazụ banyere ọdịdị ala. Nchịkọta nke ime ụlọ a na-ahụ maka Jorge Delgado García nke UPSJ Jaén.
Dronetech, bụ ụlọ nzukọ ọzọ dị na teknụzụ a, a ga-ewepụta akwụkwọ ọhụụ niile a na-akpọ RPA's (Remotely Piloted Aircraft). Roomlọ a dị na ala nke Obí nke Congresses na Ihe ngosi nke Costa del Sol ọ ga-ekwurịtakarị ihe ọhụụ ọhụrụ nke ụgbọ elu dị mfe, yana ebumnuche ịmalite njikọ aka. N'ịbụ drones, ihe dị mkpa nkà na ụzụ, maka nchịkọta na njide nke data niile.
Mgbanwe nke drones bụkwa n'ihi mmekorita n'etiti obere, ọkara na nnukwu ụlọ ọrụ, yana onyinye sitere n'aka ndị ọkachamara n'otu n'otu. Nke a bụ mbipụta izizi nke Dronetech ọ ga - ewe ụbọchị abụọ.
Nkọwapụta nke onye nlekọta ọkachamara na Dronetech bụ:
Ndị na-emepe ihe na ndị na-emepụta usoro UAV, ụlọ ọrụ na-emepụta software na ndị mmepe,
Ụlọ ọrụ nyocha: ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe,
Ndị ụlọ ọrụ dị iche iche, ọrụ nchịkwa na ịme ihe owuwu, ihe ndị e ji emepụta ihe, ihe ndị e kere eke na ihe nkiri,
Ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ ugbo, ọzụzụ nke ụgbọelu nke AESA (ATOS) kwadoro,
Manufacturers nke inyeaka ọcha na Ngwa maka drones,
Ụlọ ọrụ telivishọn, njikwa na nhazi nke nnukwudata,
Companies na ọkachamara, exhibitors na a na-egosi na: mmepe ụlọ ọrụ ọkachamara drones usoro, ndị nkesa drone ngwá na Airborne sensọ na ndị ọzọ na ngwa nkesa topographical ngwá, ọrụ ụlọ ọrụ engineering Gọọmenti, nkewa, GIS, utilities flights drone etinyere engineering (geomatics, ulo oru nnyocha, nkenke ugbo, gburugburu ebe obibi.), nkesa software engineering, na n'ikpeazụ inyeaka oru (ọzụzụ, insurance.)
Isiokwu nke ihe eji eme ihe, ga-adabere na isiokwu 4, nke bụ mmetụta uche, nchebe, ngwa na ụgbọ elu. Onye isi nhazi ya bụ Israel Quintanilla García - Mahadum Polytechnic nke Valencia.
Na mkpokọta, oge dị ukwuu iji kesaa ndị niile metụtara ya ozi ma kwalite iji teknụzụ ọhụụ arụ ụlọ na nweta nke Smart City, na-amara na Spain nwere ọtụtụ obodo ndị na-anya ụgbọ ala ruo ugbu a, gbadoro anya ịbụ nọmba 1 SmartCities Na mgbakwunye, ọ bụ ihe omume na-enye ohere igosipụta mkpa nke geotechnologies, na-egosi ndị ọbịa na ndị gosipụtara oke ngwaahịa na ọrụ, na-akwado mmepe gbasara ohere, ma na mpaghara na gburugburu.
N'otu aka ahụ, a pụrụ ịmata ike na adịghị ike nke ọrụ a, nwee ike nweta mmekorita ọhụrụ, yana ịmepụta uru agbakwunyere site na teknụzụ ọhụrụ.
Lee ị nwere ike ịdebanye aha.
Previous Post«Previous Nsogbu Venezuela - Blog 23.01.2019
Next Post 3 Akụkọ na ihe omume 21 dị mkpa na ọnọdụ GEO - Bido na 2019Next »